Sidee Baa Looga Gudbi Karaa KOFID-19? - Tilmaan Media
Doodaha ugu xiisaha badan ee dhawaanahan socda ee la xiriira cudurka faafa ee KOFID-19 ayaa waxa ay ku soo biyo shubtaan su’aashan:
“sidee baa noloshu caadi ugu soo noqon kartaa oo looga bixi doonaa cudurka koronafayras?”
Xannibaadihii uu keenay cudurka waxa ay horseedaan dhibaatooyin badan: dad badan baa shaqooyinkoodii waayay, kuwaa meelo aan dalalkoodii ahayn ku go’doomay, waxaa sii ballaartay sinnaan la’aanta dhaqaale ee bulshooyinka. Dadku waxa ay sugi la’yihiin in ay hawlahoodii iyo shaqooyinkoodii dib ugu soo noqdaan.
Hase ahaatee, si kasta oo rabitaankeenna u xooggan yahay, weli dunidu farsamo ahaan si qumman uma agaasimin habka ugu dhibta yar ee nolosha dib ugu billaabmi lahayd. Halka dalal badan oo sabool ahi aysan billowgiiba awoodin in nolosha badankeed hakad la geliyo, haddana dawladaha xoogga weyn sida Maraykanka iyo reer Yurub waxa ay dareensan yihiin in loo baahan yahay habab ugub ah iyo farsamooyin cusub oo casri ah oo sida ugu fudud, ugu dhaqsiyaha badan, uguna saxan loogu baari karo, lagula tacaali karo, loogana hortagi karo KOFID-19 si noloshu ay si fudud dib ugu billaabato.
Tallaabada u horaysa waa baaritaanka. Marna suurgal ma aha in laga adkaado cudur weli aan si xooggan loo horumarin hababka baaritaankiisa. Si dhaqaalaha dib loogu furo, waa in dawladuhu u suura gashaa in ay baaraan tirada ugu badan ee dadka si ay u ogaan karaan meelaha ugu badan ee cudurka ka baahayo ayna ugu dhaqaaqaan xakamayntiisa. In dadka cudurka qaba xilli hore la ogaado ayaa ah aasaaska ka hortagga in cudurku gaaro heerar aan waxba laga qaban karin xakamayntiisa.
Hal-abuurka farsamooyin cusub oo lagu ogaan karo dadka qaba cudurka waxa ay dowr weyn ka qaadanaysaa in tiro badan oo dadka fayraska qaba la ogaado oo laga sii hortago in ay dad kale u sii gudbiyaan. Hababka baarista cudurka koronafayras ee hadda jira waxa ay u baahan yihiin in uu fuliyo shaqaale caafimaad oo gudaha sanka ka soo qaadaya dheecaanka laga baarayo fayraska. Arrintan ayaa waxa ay qasbaysaa in shaqaalaha baaritaanka samaynaya uu mar walba iska baddalo qalabka caafimaad uu isku ilaalilnayo. Waxaa jira dadaallo loogu jiro in bukaanku uu isaga iska qaadi karo dheecaanka kaddibna la baaro si loo ilaaliyo caafimaadka shaqaalaha caafimaadka. Waxaa rajo weyn laga leeyahay in la helo qaab baaritaan oo u shaqeeya sida baaritaannada uurka lagu ogaado, ee haweenku isticmaalaan, oo qofka isaga shakiya cudurka kofid-19 uu isaga oo gurigiisa jooga isku baari karo kuna ogaan karo natiijada. Horumarka laga gaaro farsamooyinka noocan ah waxa ay keenayaan badbaado naf iyo maalba leh oo aad u sarraysa maadaama ay aad u yaranayso xiriirka uu qofka cudurka qaba la samaynayo dadka kale.
Waxaa sidoo kale loo baahan yahay in la horumariyo nidaam bulsho oo lagu hirgeliyo baaritaannada. Weli meelo badan oo dunida ka mid ah waxa aan la jaangoyn shuruudaha laga rabo cidda la baarayo. Haddii hay’adaha caafimaadku aysan baarin dadkii saxda ahaa ee ay daruuriga ahayd in la baaro sida shaqaalaha aasaasiga ah, dadka astaamaha cudurka qaba iyo kuwa xiriirka la sameeyay qof cudurka qaba, waxay ka dhigan tahay tiro badan oo dad cudurka qaba ah in ay bulshada ku sii dhex jiraan oo dad badani ay ku sii faafiyaan cudurka. Meelaha qaarkood, cisbitaallada waxa ay xoogga saaraan bukaannada u yimaada iyaga oo aan isku hawlin amaba tabar u hayn dadka kale ee cudurka qaba ee aan iska bixin karin kharashaadka baaridda ee meelo badan oo dunida ah la iska qaado.
Marka laga soo tago baaridda bukaanka, waxaa sidoo kale u baahan in horumar laga sameeyo hab-raaca dabaggalka dadka cudurka qaba iyo kuwa ay xiriirka la sameeyeen. Isla marka ay shaqaalaha caafimaadku ogaadaan in qof laga helay farysaska cudurka, waa in ay ku dhaqaaqaan sidii loo ogaan lahaa dadka uu xiriirka la sameeyay ee ay suura galka tahay in ay qaadeen fayraska. Arrintan xalkeeda waxaa billow u noqon kara in teknoolojiyada si fiican looga faa’iidaysto. Tusaale, qofka laga helo koronafayras waxaa la weydiin karaa lambarka telefonada dadka uu xiriirka la sameeyay dabadeedna waxaa la samayn karaa nidaam si toos ah farriimo ugu diraya dadkaas oo ogaysiinaya in ay is baaraan.
Sida la filan karo, qof kasta oo laga helo fayraska cudurka waxa uu u baahnaan doonaa dawooyin uu isticmaalo. Hase ahaatee, ilaa hadda, ma jiraan dawooyin si dhab ah u daweeya cudurka. Hydroxychloroquine, ayaa ka mid ah noocyada dawooyinka ilaa hadda aadka loogu isticmaalay in ay bukaannada ka caawiso sida jirkooda uu ula dagaallami lahaa fayraska. Waxaa khubarada caafimaadka ay ku hawlan yihiin qaabab kala duwan oo bukaannada looga daaweyn karo ama kaalmayn karo saamaynta cudurka koronfayras. Mid ka mid ah qaababkaasi ayaa ah in dadka ka bogsooda cudurka laga qaado dhiig, dabadeedna maaddama balaasmaha ee dhiigga lagu duro dadka buka. Tijaabooyin badan oo qaabkan la sameeyay ayaa lagu guulaystay hase ahaatee weli ma gaarsiisana heer boqolkiiba boqol lagu kalsoonaan karo. Qaab kale oo la is leeyahay waa lagu daweyn karaa cudurka koronfayras ayaa waxa uu yahay in la ogaado ‘anti-bodies’-ka wax ka qaban kara la dagaallanka jirka ee fayraska. Kaddib in maaddooyinkaasi lagu farsameeyo laab loona isticmaalo daweynta cudurka. Waxa aan weli la hubin xaddiga anti-bodies-ka ee loo baahnaanayo halkii dose.
Dadaallada kale ee lagama maarmaanka in maalgelin ama hal-abuur lagala yimaado waxaa ka mid ah helidda tallaal looga hortago cudurka. Bil walba oo aan la helin tallaal waxa ay ka dhigan tahay bil dheeraad ah oo dadku hawlahooda ka xanniban yihiin, dhaqaalahana uu hakad ku jiro oo noloshana aysan caadi ku soo noqon karin si kasta oo loo dabciyo sharciyada bannaan u soo bixidda oggolaanaya.
Nooca tallaalka ee ugu fiican waxaa loo yaqaanaa ‘Tallaalka RNA”, waa midkii ugu horeeyay ee tijaabadiisa la bilaabay. Si kal duwan tallaalka hargabka, oo ka dhigan in jirka banii’aadanka lagu duro qeybo ka mid ah fayarska hargabka si jirka uu u barto nooca fayraska uuna difaac uga yeehso, tallaalka RNA, waxaa jirka la siinayaa sirta hiddaha sidaha fayraska (genetic code) taas oo jirka siinaysa in uu iskiisa u soo saaro difaacii lagula dagaallami ahaa cudurka iyada oo aan qofkii fayraskii lagu durin. Tallaalka RNA waxaa loo doorbidaa in jirka u baddalo warshad samaysa difaaca fayraska.
Waxaa jirta ugu yaraan shan dadaal oo kale duwan oo ifafaale fiican muujinaya. Maadaama aan la aqoon qaabka ugu habboon ee shaqayn kara oo lagu daweyn karo ama looga hortagi karo cudurka, waxaa daruuri ah in la maalgeliyo dadaallada kala duwan ee loogu jiro helidda tallaalka si dunida xilli hore uga bogsooto cudurka.
Inta aan la helin tallaal looga hortagi karo cudurka KOFID-19, dawladaha dunida waa in ay ku heshiiyaan sidii loo qeybin lahaa. Dawlada maal-geliya mashaariicdka soo saarista tallaalka, kuwa ka qeyb qaata tijaabadiisa, iyo kuwa uu cudurka sida daran u saameeyay waxa ay ku doodi doonaan in ay iyaga yeeshaan mudnaanta. Sidaa daraaddeed, waa in la helaa heshiis caalami ah oo qeexaya sida loo qeybinayo talaalka. Waxaa walwal badani ka jiraa maadaama qolooyin kala duwan oo dano iska soo horjeeda leh ay ka shaqaynayaan soo saarista tallaalka, in ay si fudud ugu heshiiyaan habka dadyowga dunida oo dhan loo gaarsiin karo waxa ay u muuqataa mid aad u adag. Kooxda ugu horaysa ee u suura gasha in ay talaal soo saarto waxa ay heli doontaa fursad weyn oo ay tallaabooyin dunida kaga sii hormarto. Waxa ay u badan tahay in qeybinta tallaalka lagu xiri doono siyaasadaha arrimaha dibadda ee dalalka, iyada oo loo adeegsan karo aalad maquunin oo danaha dawladaha xoogga waaweyn ay ka leeyihiin dalalka kale.
Afrika, oo qiyaastii 17% ka ah tirada dadyowga ayaa ilaa hadda waxaa laga soo gudbiyey 163,599 kiis, halka qaaradda gudaheeda ay cudurku ugu geeriyoodeen tiro gaaraysa 4,611 qof, taas oo u dhiganta 2% tirada kiisaska cudurka ee dunida guudkeeda. Khubarada qaarkood ayaa tirada aad u hoosaysa ee Afrika laga soo tebiyay waxa ay la xiriiriyeen baaritaannada ku aaddan cudurka oo aad u yar. Hase ahaatee, Hay’adda Caafimaadka Adduunka (WHO) ayaa xog ururin ay samaysay waxa ay ku shaacisay in xawliga faafidda kofid-19 ee qaaradda uu aad uga gaabiyo marka loo barbardhigo Yurub iyo Ameerika.
Afrika oo dalalkeedu aan si qumman u hirgelin karayn xakamaynta isu socodka dadka ayaa waxa ay keeni kartaa in cudurku u haleelo16-26% dadka qaaradda ilaa dhammaadka sanadka. In kastoo heerarka dhimashada ee cudurka ay hoosayn doonto maadaama qaaraddu ay dadkeedu u badan yihiin da’ yar, haddana faafidda xad dhaafka ah ee cudurka waxa ay horseedaysaa in goobaha caafimaadku ay buux dhaafaan oo dad badan oo uu cudurka soo ritay ay heli kari waayaan daryeelkii caafimaad ee ay u baahnaan lahaayeen.
Ugu danbaytii, dadyowga dunida waxaa mar kasta qasab ku ah in uu ka wada shaqeeyo sidii wax badan looga baran lahaa cudurada dilaaga ah sidan kan hadda dunidii oo dhan xannibaadda ku soo rogay. Waxaa lagama maarmaan ah in laga shaqeeyo sidii loo xoojin lahaa tayada hay’adaha caafimaad ee ku aaddan la tacaalidda curuda faafa. Haddii sida ugu wanaagsan loo isticmaalo aaladaha gacanta banii’aadanka hadda ku jira, si caqliyaysanna loo fuliyo qorsheyaasha ka hortagga cudurka iyo xal u heliddiisa, dunida waxa ay ka guulaysan doontaa cudurkan ‘pandemic’-ka ah. Intaa kaddib, dunida waxa ay u baahnaan doontaa in ay ka fekerto sidii looga hortegi lahaa cudurada soo socda.
Via: Xasan C. Xasan
Madrid ayaa waxa ay garaacday Sociedad 2-1